octobre 2018 · déliremadagascar
Socio-eco	 30 octobre 2018 lynda
SEMINERA GOAVANA: Ny fanalihidy hiverenan’ny fahasalamana
Ny aretina rehetra dia misy fanafany avokoa na dia homamiadana aza. Misy fitaovana maro sy fanalahidy maro hampiverina ny fahasalamana. “Nataon’ny Mpahary mba ho salama lalandava isika olombelona fa adinontsika ny hiverenana amin’izany. Tonga izao ny fotoana hamelabelarana an’izany mba hahazoan’ny tsirairay fahasalamana, ho tomady lalandava ary ny antitra ho lasa tanora”, hoy ny dokotera Rasolofoniaina Darsot nandalina “médicine générale”, “science énergetique”, “homéopathie”. Ao anatin’ny seminera goavana izay tanterahina ny 2 ka hatramin’ny 4 novambra 2018 ao amin’ny Live Hôtel Andavamamba no hamelabelarana misimisy kokoa ny fifehezana ny teknika hahazoana fahasalamana.
Amin’ny alalan’ny fampianaran’i Grigori Gravoboï, tanora manam-pahaizana nahita hevitra maro hitandroana ny fahasalamana no hanomezana fahalalana fototra ho an’ireo liana amin’ny seminera. Nambaran’ny dokotera Rasolofoniaina fa efa nisy ny andrana nataon’i Grigori Gravoboï momba ny famerenana ny antitra ho lasa tanora ary nohamarinin’ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana (OMS, UNICEF) izany. Tao anatin’ny “clinique” iray nisy marary folo nojeren’i Grigori Gravoboï tao anatin’ny dimy minitra ny manjo azy ireo sy ny vahaolana ho atao amin’izy ireo. Antitra ny iray tamin’ireo ka nahena ho 40 taona ny vatany. Voan’ny raboka izy ity ka nambarany fa tsy tao intsony ny havokavokany. Rehefa natao amin’izay ny “scanner” dia hita fa miha miverina miforona indray ilay taova tsy tao. Tsy ho lasa lavitra ny olona iray raha tsy mivelatra ny fahatsiarovan-tenany (conscience). Miompana amin’ny fitsaboana “quantique” na ny fifandraisan’ny vaovao izay mety hiseho ary ny fampiasana izany, ny asa goavana miandry ny olombelona, ny fivelaran’ny fahatsiarovan-tena ny fihaonana mandritra ny telo andro. Afaka mifehy ny teknika momba izany ny olon-drehetra.
Sport	 29 octobre 2018 R Nirina
JEREMY MOREL: Hanatevina ny Barea
Na dia efa tafakatra any amin’ny dingan’ny famaranan’ny tompondakan’i afrika (CAN 2019) atao any Cameroun aza ny Barean’i Madagasikara dia tsy mitsahatra ny mitady ireo mpilalao manana fahaiza-manao ny mpanazatra, Nicolas Dupuis. Continuer la lecture →
Socio-eco	 26 octobre 2018 lynda
ORINASA HYDIS: Manome fahafaham-po ny mpanjifa hatrany
“Ticket carburant” mitentina 150.000 Ariary no azon’ny voalohany tamin’ny lalao tombola nokarakarain’ny orinasa Hydis. Continuer la lecture →
MPIANATRY NY ONIVERSITE EUROI : Ifandrombahan’ny orinasa
Mpianatra telopolo indray nahazo ny diplaoma Licence sy Ingéniorat. Nivoaka tamin’ny fomba ofisialy ny 26 oktobra 2018 tao amin’ny espace Sombiniaiko Soavimbahoaka ireto andiany faha-28 misalotra ny anarana hoe : « émeraude » ireto. Continuer la lecture →
Socio-eco	 25 octobre 2018 R Nirina
FANAMBOARANA TRANO: Fampiasam-bola azo antoka
Ahazoana tombony kokoa ny fampiasam-bola amin’ny fanamboarana trano eto Madagasikara. Continuer la lecture →
« CONTENEUR » 12 AO AMIN’NY ORINASA IMEX : Mijaly ny tompon’entana
Narindrin’ny fadintseranana efa ho iray volana sy folo andro ny fitahirizana entana ao amin’ny orinasa IMEX. Continuer la lecture →
politique	 25 octobre 2018 lynda
OLOM-PANJAKANA MANAO PROPAGANDY: Hiroso amin’ny fitoriana azy ireo ny DFP
Miditra amin’ny herinandro faha-telo ny propagandy isika izao, efa an-jatony ny olom-panjakana azo sary nanao fampielezan-kevitra. Continuer la lecture →
Sport	 25 octobre 2018 R Nirina
Manoloana ireo resaka izay miparitaka momba ireo mpilalao roalahy ireo dia nilaza ny heviny ireo mpikambana ao amin’ny fédérasiona Malagasin’ny baolina kitra. Continuer la lecture →
Sport	 24 octobre 2018 lynda
Vonona hanohana hatramin’ny farany ny ekipam-pirenena malagasy ny Club des supporteurs du football malagasy (CSFM). Continuer la lecture →
Socio-eco	 24 octobre 2018 R Nirina
FOIRE INTERNATIONALE DES GEMMES ET BIJOUX DE MADAGASCAR : Miteraka asa
Mbola malalaka ny tsena eo amin’ny sehatry ny fitrandrahana sy fanodinana ny vatosoa eto Madagasikara. Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy omaly 23 Oktobra 2018 ka hifarana ny 27 Oktobra ny tsena iraisam-pirenena amin’ny sehatry ny vatosoa na « Foire internationale des gemmes et bijoux de Madagascar » atao eny amin’ny « Mining business center » Mamory Ivato. Continuer la lecture →